Forum serasera malagasy Fiara hybride!!!! - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Fiara hybride!!!!
Herimiafina - 10/02/2006 17:27
Ahoana ny fandehan'ity teknolojia vaovao ity e! Fiara sady amndeha amin'ny solika toy ny fiara rehetra kanefa mandeha amin'ny herin'aratra ihany koa, mety hisy avenir ve ho an'ny tontolo iaianana sy ny faharitran'ny tahirintsolika any aoriana any?8)
vale - 10/02/2006 21:57
Zaho aloha mahita fa tena mety tokoa izany am resaka tontolo iainana e:wink:
lapino - 10/02/2006 22:36
Mbola solika foana ange no manome ny angovony rehetra rehetra e! Na ny angovo elektrika ampirimina anaty bateri-ny aza mbola avy amin'ilay motera thermika ihany no amokarana azy. Ny tena tombony fotsiny angamba dia ny "souplesse"-n'ny fampiasana angovo rehefa miendrika herin'aratra izy.
Tsy tena hoe vaovao izy io, fa efa elaela ihany ny japoney no nanao azy. Ny an'ny eoropeana no mbola prototype daholo (ny amerikana tsy haiko). Ny toyota prius izao toa efa t@ 1997 no nanomboka namidy grand public, ny honda koa toa efa hatramin'ny 2000 no namoaka Civic sy Accord hybride. Ny PSA frantsay izao vao manomboka hirotsaka, mbola vao manao développement.
mbositra - 13/02/2006 21:06
Mbola lafo vidy izy @izao fa re'hefa tapitra ve ny solika eto an-tany tsy hanaraka daholo?
Herimiafina - 13/02/2006 21:48
Ka eo indrindra isika izao. Araka ny kajikajy etsy sy eroa dia tokony hitsitsy lasantsy ny zanak'olombelona. Izany hoe ariana ny fiara mandany be sy mitroka be ka dia soloina fiara lehibe toy ny bus fitaterana na fiara hybride mitsitsy lasantsy kokoa.
Lafo anefa ny vidiny satria mitovy amin'ny mividy lasantsy mandritry ny fotoana maharitra + ny vidin'ny fiara ihany ny vidin'ny hybride.
Izany hoe lany any amin'ny vidiny ny vola tokony hividianana lasantsy amin'ny fotoana maharitra.8)
mbositra - 14/02/2006 22:44
rehefa maka betsaka ianao ampidiniko ny vidiny
TMalefaka - 21/03/2006 03:34
Marina fa tena mbola tsy dia misy ny fiara hybride. Ny tena olana dia tsy ny solika loatra fa ireo mpanamboatra fiara no tsy dia marisika loatra amin'izy io. Ny antony dia satria nandany vola ry zareo t@ "chaîne de montage" ary koa mila mamokatra kojakoja mandritra ny 20 taona, raha tsy diso. Ka raha tsy miverina ny vola nampiasainy dia tsy harisika ireo mpanamboatra fiara ireo.
Fiffi - 21/03/2006 06:31
mbositra: nga mpivarotra ?
lapino - 25/03/2006 04:50
Herimiafina Lafo anefa ny vidiny satria mitovy amin'ny mividy lasantsy mandritry ny fotoana maharitra + ny vidin'ny fiara ihany ny vidin'ny hybride.
Misy tarehimarika ve any ahafahana mampitovy ny fihinanan'ny fiara hybride sy ny fiara thermika fotsiny? Tokony hitovy ihany ireo manko, satria samy avy ao amin'ny motera thermika daholo ny angovo miasa rehetra!!! (raha tsy hoe misy loharanon'angovo hafa ampidirana herin'aratra ao, kanefa raha izay dia misy vidiny hafa koa izany)
Fa raha ny mahalafo ny vidiny aloha dia tsotra: farafahakeliny misy motera fanampiny (motera elektrika), ary misy batery matanjaka fanampiny.
MOORE007 - 07/05/2006 10:33
Ilay fiara hybride anie izany dia tsy maintsy lafo satria 2 (roa) ny môterany (môtera mila solika ny iray essence na gasoil ary môtera elektrika ny iray). Efa misy koa ny fiara elektrika fotsiny fa ny olana dia kely ny autonomie, azo charger-na amin'ny énergie renouvellable ny batterie fa saingy mila fotoana elabe vao feno. Asa aloha na rahoviana vao mba misy hividy an'izany ny malagasy fa raha tsy efa misy mampiasa koa anie tsy mahita hevitra vaovao eh!